"Ary raha mbola niresaka sy niara-nisaina izy, dia nanatona Jesôsy ka niaraka taminy."- Lio. 24:15.
Ireo izay mikatsaka ny fahamarinan'i Kristy dia hisaintsaina ireo lohahevitry ny famonjen-dehibe (...)
Mamonto ny fanahy ireo lohahevitra manan-danja sy manandratra ireo. Fahamasinana sy fahamarinana, ary fahasoavana sy fahitsiana no mameno ny fisainana. Maty ny izaho ka i Kristy no velona ao am-pon'ny mpanompony. Mampamolivoly ny fony, tahaka ny an' ireo mpianatra roa nandeha ho any Emaosy izay niara-nandeha tamin'i Kristy sy nanazavany ny Soratra Masina mahakasika Azy, ny fandinihana ny Teny.
Vitsy loatra no mahatsapa fa i Jesôsy, izay tsy hitany maso, dia miara-mandeha aminy! Hanao ahoana ny henatra ho tsapan'ny maro raha reny ny Feony miteny aminy ary koa raha fantany fa ren'i Jesôsy avokoa ny resaka feno fahadalana sy tsy misy heviny ataony! Fon'olona firifiry no ho heni-kafaliana raha fantany fa teo anilany ny Mpamonjy, nanodidina azy ireo ny rivotra masin'ny fanatrehany, ary nihinana ny mofonaina izy ireo! Hanao ahoana re ny hafalian'ny Mpamonjy raha mandre ireo mpanara-dia Azy miresaka ny amin'ireo lesona sarobidy mirakitra torolalana, ho faly Izy mahalala fa ankamamian' izy ireo ny zava-masina!
Rehefa mitoetra ao amin'ny fo ny fahamarinana dia tsy misy toerana ho an'ny fitsikerana ireo mpanompon'Andriamanitra na koa ny fijerena izay tsy fetezana ao amin'ny hafatra ampitondrain'Andriamanitra. Izay ao am-po ihany no miloatra eo imolotra. Tsy azo fehezina tsy hivoaka izany. Ireo zavatra nomanin'Andriamanitra ho an'ireo tia Azy no ho anton-dresaka. Toy ny ranovelona ao amin'ny fanahy ny fitiavan'i Kristy, miboiboika ho amin'ny fiainana mandrakizay izany izay miteraka sakelidrano velona mitondra aina sy fifaliana.- CPTS, tt. 341,342.
Mbola zava-dehibe noho izany koa aza ny herin'ny Baiboly eo amin'ny famolavolana ny toe-panahy. Ny olombelona izay nohariana hanana fifandraisana amin'Andriamanitra, dia tsy hahita ny tena fiainany marina sy ny fivelarany afa-tsy ao amin' izany fifandraisana izany. Koa satria ao amin'Andriamanitra no natao hahitany ny fifaliany ambony indrindra, dia tsy misy afa-tsy izany no afaka hampangina ny fanirian'ny fony, sy hanome fahafaham-po ny hanoanana sy ny hetahetan'ny fanahiny. - FK, U. 135.